ग्यास्ट्रिक बढ्यो, घरमै हुने सामान्य उपचारबाट क्षणभरमै यसरी लाभ लिन सकिन्छ - Internet Sansar
Home / Health / ग्यास्ट्रिक बढ्यो, घरमै हुने सामान्य उपचारबाट क्षणभरमै यसरी लाभ लिन सकिन्छ
internetsansar October 13, 2019	Health Comments Off on ग्यास्ट्रिक बढ्यो, घरमै हुने सामान्य उपचारबाट क्षणभरमै यसरी लाभ लिन सकिन्छ 465 Views
अनियमित जीवनशैली र खराब खानपानका कारण एसिडिटी बढेर दुःख पाउनु आधुनिक जीवनशैली अपनाउने हामी सबैका लागि सामान्य कुरा हो । अमिलो पानी बढ्दा देखिने एकप्रकारको समस्यालाई एसिड रिफ्लक्स भनिन्छ ।जब लोअर एसोफेगल स्पिंचर (एलईएस)ले राम्रो काम गर्दैन र अन्ननली हुँदै अमिलो पदार्थ पेटको माथिल्लो भागतिर जान थाल्छ, यस्तो अवस्थालाई एसिड रिफ्लक्स हुन्छ । यसको प्रमुख कारण लोअर इसोफेगल स्पिंचरमा समस्या देखिनु नै हो ।यो समस्याले गर्दा हाम्रो पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गदैृन । यसले छाती दुख्ने वा अथवा मुटु पोल्ने समस्या देखिन्छ । यसबाट अपचको समस्या पनि देखिन्छ । यस्तो समस्या भएका मानिसहरु एकदमै डराउने अवस्थामा पुग्छन् ।
यो समस्या बढ्दै जाँदा बिरामी असन्तोष बढ्ने, कुनै पनि कुरा निल्न समस्या हुने, पेट र पिठ्यूँको तल्लो भाग पोल्ने, वान्ता हुने सम्मका समस्या देखिन्छ ।यसको घरेलु उपचार कसरी गर्ने ?सामग्रीहरु१. एउटा आलू२. एउटा दाना स्याउ विधि:आलुलाई सफासँग पखालेर बोक्रा निकाल्नुहोस् र यसको रस बनाउनुहोस् । स्याउलाई पनि सफा गरेर बोक्रा निकाल्दै जुस बनाउनुहोस् । दुवै रसलाई मिलाएर खाना खानुभन्दा कम्तिमा एक घन्टा अगाडि दिनमा दुईपटक सेवन गर्नुहोस् । यसले तत्काल राहत महसुस हुनेछ ।dainik headlines-ओन्लिआयुर्वेद डट कमको सहयोगमा
पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्याको चिकित्सकीय नाम ग्यास्ट्राइटिस हो । ग्यास्ट्राइटिसको समस्यामा पेटमा ग्यास बन्छ । यस्तो अवस्थामा फेट फुल्छ र पीडा हुन थाल्छ । यसैले सबैभन्दा पहिला कस्तो खाद्यपदार्थ लिनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्नु, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्नु, रिंगटा लाग्नु, टाउको दुख्नु, पेट फुल्नु गयास्ट्रिकका लक्षण हुन्। त्यसैगरी ग्यास्ट्रिकमा वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ-ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, पेट हुडेल्ने, तौल कम हुने लक्षण देखिन्छ।
आमाशयका भित्तामा भएको इन्फ्लायिसन (सुन्निएर रातो तातो भएर दुख्ने समस्या) भने आमाशयका भित्ताको श्लेष्म झिल्ली च्यातिएर घाउ भएको अवस्थालाई भने ग्यास्ट्रिक अल्सर भनिन्छ। ग्यास्ट्रिकको प्रारम्भिक अवस्था हो भने अल्सर त्यसैको विकराल रूप हो। ग्यास्ट्राइटिसलाई तीव्र तथा दीर्घ /जीर्ण गरेर दुई समूहमा बाँडिएको छ। तीव्र ग्यास्ट्राइटिस पेटका भित्ताहरूमा भएका कोषहरूका लागी हानी गर्ने पदार्थहरूको सेवनले गर्दा हुन्छ। यी पदार्थहरूमा, दुखाइ कम गर्ने औषधी (एस्पि्रन, बु्रफेन, निम्स, नेप्प्रोक्सिन) जस्ता औषधी, विषसेवन, मसला, खुर्सानी र नुन ज्यादा हालेको खानेकुरा, जाँड-रक्सी, कोकिनजस्ता मादकपदार्थ पर्दछ। आमाशयमा एच. पाइलोरिक लगायत अन्य ब्याक्ट्रेरिया, भाइरस, कृमि वा फंगसको संक्रमणले पनि हुने गर्छ।
जीर्ण ग्यास्ट्राइटिस रोग हाम्रो जीवनशैली खानपान, शैली मानसिकता र शरीरको प्रकृतिसँग जोडिएको छ। जथाभावी खानपानले पनि ग्यास्ट्रिक बढाउँछ। अनियमित जीवनशैली जस्तै भोक लागेको बेलामा नखाने, भोकभन्दा ज्यादा खाने, खाना निश्चित समयमा नखाने, पचाउन कठिन हुने खाना खाएपछि तत्कालै सुत्ने र शारीरिक श्रम गरेलगत्तै खानेहरूमा यो रोग ज्यादा देखिएको छ। व्यस्तता र भागदौडले भरिएको जीवन ज्यूँनेहरू, मानसिक तनावको चपेटामा परेकाहरू, मनोरञ्जन नगर्नेहरू, भय, चिन्ता, शोक उदासिनता र अनिद्राका रोगी, शारीरिक श्रम वा व्यायाम नगर्नेहरू पनि यो रोगका सिकार हुन्छन्। लामो समयसम्म जँाड-रक्सी, चिया, कफी, कार्बनिक पेय कोक, पेप्सी आदि खानेहरूमा पनि यो रोग ज्यादा देखिएको छ। ग्यास्ट्राइटिस आत्मघाती प्रतिरक्षा प्रणालीको कारणले पनि यो रोग हुने गर्छ। यसैगरी पेटको अपरेसन कलेजो, मिर्गौला, फियो तथा आन्द्राका रोग, एचआइभी/एड्स र विशेष मानसिक रोगावस्थामा पनि देखा पर्छ ।
यस्ता बेलामा अपनाउनु पर्ने सावधानीग्यास बनाउने खाद्यपदार्थ नखानुस् ग्यास्ट्राइटिस समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, ग्यास बनाउने खालका खानेकुरा । केक, कार्बोनेटयुक्त सामग्री, अमिलो फल, काउली, बन्दा, सुपारी पेटमा ग्यास बनाउने खालका खाद्यपदार्थ हुन् । ग्यास बन्ने अर्को कारण हो, लामो समयसम्म भोको रहनु ।समयमा खाना खाने गर्नुहोस्नियमित रुपमा खाना खाने बानी गर्नाले ग्यास्ट्राइटिसको समस्या समाधान हुन सक्छ । बिहान नास्ता पनि नगर्नु र दिउँसो एकसाथ खाना खानु गलत बानी हो । यसले ग्यास्ट्राइटिसको समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसबाट बच्न नियमित रुपमा खाना खानुपर्छ। खाना खाँदा चपाएर मात्र खानुपर्छ ।
कम मसालेदार खानाबढी तेल र मसाला मिसाएको खाना पनि ग्यास्ट्रिकको कारण हुन सक्छ। यसैले यस्ता कुरा मिसाइएको खानेकुराबाट बच्नुहोस्। खानामा सधैं हरियो तरकारी सामेल गर्नुहोस्, पेट पूरै भरिनुभन्दा खान मन लाग्दालाग्दै उठ्नुहोस्। यसबाट खाना राम्ररी पच्छ। साथै ध्यान दिनुहोस्, खाना खाएको आधा घण्टापछि मात्र पानी पिउनुहोस्।रक्सीबाट बच्नुहोस्बढी रक्सी पिउने बानीले ग्यास्ट्रिकको समस्या बढाउँछ। यद्यपि रक्सीमात्र यसको मुख्य कारण होइन। तर, रक्सी नखाँदा या यसको सेवन सीमित गर्नाले भविष्यमा हुने ग्यास्ट्राइटिसबाट बच्न सकिन्छ।
थोरै खानुहोस्, नियमित खानुहोस्ग्यास्ट्रिकको समस्या पेटसंग सम्बन्धित समस्या हो। त्यसैले पेटलाई आराम दिन थोरै खाने बानी गर्नुपर्छ। धेरै खानाले पनि ग्यास्ट्रीकको समस्यालाई असर गर्छ। यसका अलावा खानामा ल्याक्टोज र ग्लूटनजस्ता आहार लिनबाट बच्नुहोस् ग्यास्ट्रिकमा पेटमा बन्ने एसिड कम गर्न प्रभावकारी औषधि एन्टासिड या अन्य औषधि दिइन्छ। अन्यथा एसिड फुलेको क्षेत्रमा बढी जलन पैदा गर्ने कारण बन्न सक्छ। साथै ग्यास्ट्राइटिसका दौरान एस्पिरिन र नन स्टेराइडल–एन्टी इन्फ्लेमेटरी जस्ता औषधि दिनबाट बच्नुपर्छ।
Previous जोडी मिलाउने अनि निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर…शेयर गरी दर्शन गरौं
Next कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने अत्यन्त उपयोगी कुरा, जान्न सबै कै लागि अनिबार्य !